Taratra nokleary: inona izany, toetra, karazany ary fampiasa | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 14/07/2021 12:00 | Angovo nokleary
Eo amin'ny sehatry ny angovo nokleary, Taratra nokleary. Fantatra amin'ny anarana radioactivity koa izy io. Izy io dia ny famoahana tsiranoka na tsiranoka na izy roa miaraka. Ireo poti-taratra sy taratra ireo dia avy amin'ny fisaritahan'ny nuclides sasany mamorona azy ireo. Ny tanjon'ny angovo nokleary dia ny hanaparitahana ireo firafitry ny atôma anatiny hamokarana angovo amin'ny alàlan'ny fizotry ny fihenan'ny nokleary.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe taratra nokleary, ny toetrany ary ny lanjany.
2 Karazana taratra nokleary
2.1 Sombiny Alpha
2.2 Sombiny beta
2.3 Sombiny gamma
3 Taratra nokleary amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra
Ny radioactivity dia famoahana spontanina sombintsombiny na taratra, na izy roa. Ireo poti-taratra sy taratra ireo dia avy amin'ny famoahana ny nuclides sasany mamorona azy ireo. Niparitaka izy ireo noho ny fandaminana ireo rafitra anatiny.
Ny fahasimbana amin'ny radioaktifa dia mipoitra ao amin'ny atiny tsy miovaova. Izany hoe ireo izay tsy manana angovo mifamatotra ampy hitehirizana ny atiny. Antoine-Henri Becquerel dia nahita taratra tsy nahy. Taty aoriana, tamin'ny alàlan'ny fanandramana nataon'i Becquerel, nahita fitaovana radioaktif hafa i Madame Curie. Misy karazany roa ny taratra nokleary: radioactivity artifisialy sy voajanahary.
Ny radioactivity voajanahary dia ny radioactivity izay mitranga amin'ny natiora noho ny rojom-bolo misy ny radioaktifa voajanahary sy ny loharanom-baovao tsy an'ny olombelona. Nisy foana izany teo amin'ny tontolo iainana. Ireto misy fomba manaraka azo ampitomboina ihany koa ny radioactivity voajanahary:
Antony voajanahary. Ohatra, ny fipoahan'ny volkano.
Ny antony tsy mivantana ataon'ny olombelona. Ohatra, ny mihady ambanin'ny tany hananganana ny fototry ny tranobe na ny fampivoarana angovo nokleary.
Etsy ankilany, ny radioactivity artifisialy dia taratra radioaktifa na ionika avy amin'ny fiavian'olombelona avokoa. Ny hany mampiavaka ny taratra voajanahary sy ny taratra namboarin'olombelona no loharano niavian'izany. Ny vokatr'ireo karazana taratra roa dia mitovy. Ohatra iray amin'ny radioactivity artifisialy dia radioactivity novokarin'ny fitsaboana niokleary na ny fihenan'ny fihenan'ny nokleary ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra hahazoana herinaratra.
Amin'ireo tranga roa ireo, ny taratra ionizing mivantana dia ny taratra alfa sy ny fahasimban'ny beta vita amin'ny elektrôna. Etsy ankilany, ny taratra ionizing ankolaka dia taratra elektromagnetika, toy ny taratra gamma, izay fotona. Rehefa ampiasaina na ariana ny loharanon'ny taratra nataon'olombelona, ​​toy ny loharano voajanahary voajanahary, dia vokarina amin'ny ankapobeny ny fako radioaktifa.
Karazana taratra nokleary
Misy karazany telo ny taratra niokleary nokleary: taratra alfa, beta ary gamma. Ny sombintsombin'ny alfa dia ireo izay manana fiampangana tsara, ny poti-beta dia ratsy ary ny taratra gamma kosa tsy miandany.
Azo dinihina izany taratra elektromagnetika mankany amin'ny taratra gamma sy taratra X. Ny zana-kazo avy amin'ny taratra alpha sy beta koa dia avoaka. Ny karazana famoahana tsirairay dia samy manana ny fotoan'ny fidirana amin'ny angovo sy ny angovo. Fantatsika fa ity karazana taratra nokleary ity dia mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny fiainana amin'ny fomba samihafa. Hodinihintsika tsirairay ny taratra nokleary misy sy ny vokany:
Ny tsiranoka Alpha (α) na taratra alpha dia endrika taratra tsiranoka mihombo amin'ny angovo mahery. Saika tsy manana fahaizana miditra anaty tisu izy satria lehibe. Izy ireo dia misy proton roa sy neutron roa, izay fehezin'ny hery matanjaka.
Ny taratra alfa, noho ny fiatraikany amin'ny herinaratra, dia mifamatotra mafy amin'ny raharaha. Mora resin'ny fitaovana izy ireo. Dimy vitsivitsy monja no azon'izy ireo atao ny manidina amin'ny rivotra. Azon'izy ireo atsofoka ao anaty sosona ivelany indrindra amin'ny hoditry ny olombelona, ​​ka tsy atahorana ho faty izy ireo raha tsy hoe mifoka rivotra na voatelina ilay loharano. Amin'ity tranga ity, na izany aza, ny fahavoazana dia ho lehibe kokoa noho ny ateraky ny taratra ionizing hafa. Amin'ny fatra avo dia hiseho ireo soritr'aretina mahazatra amin'ny fanapoizinana amin'ny taratra.
Ny taratra beta dia endrika taratra ionizing ampiasain'ny karazan-tsokosoko radioaktifa sasany. Raha ampitahaina amin'ny fifandraisan'ny sombintsombin'ny alpha, ny fifampiraharahana eo amin'ny sombintsombin'ny beta sy ny zavatra dia mazàna manana ambaratonga folo avo heny sy ny fahaizan'ny ionization mitovy amin'ny ampahafolony. Voasakana tanteraka amin'ny alàlan'ny alimina milimetatra vitsivitsy izy ireo.
Taratra gamma dia taratra elektromagnetika vokarin'ny radioactivity. Izy ireo dia mampiorina ny atiny nefa tsy manova ny atiny proton. Izy ireo dia miditra lalina kokoa noho ny taratra β, saingy manana ambaratonga ambany amin'ny ionisasi izy ireo.
Rehefa mamoaka taratra gamma ny nucleus atomika mientanentana dia tsy hiova ny isa sy ny isa atiny. Ho very angovo kely fotsiny ianao. Ny taratra gamma dia mety miteraka fahasimbana lehibe amin'ny sela sela, ka izany no antony hanamorana ny fitsaboana sy ny sakafo.
Taratra nokleary amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra
Ny toby nokleary dia fotodrafitrasa mampiasa angovo nokleary hamokarana herinaratra. Izy io dia ao amin'ny fianakavian'ireo toby famokarana herinaratra, izay midika fa mampiasa hafanana izy hiteraka herinaratra. Ity hafanana ity dia avy amin'ny fiovan'ny fitaovana toy ny uranium sy plutonium. Ny fiasan'ny toby nokleary dia miankina amin'ny ny fampiasana hafanana handroahana turbine amin'ny alàlan'ny etona-drano, izay mifamatotra amin'ireo mpamorona herinaratra. Ny reacteur fission nokleary dia fotodrafitrasa afaka manomboka, mitazona ary mifehy ny fihenan'ny rojom-pitantanana, ary manana fitaovana ampy hanalana ny hafanana vokariny. Mba hahazoana etona rano, uranium na plutonium dia ampiasaina ho solika. Ny dingana dia azo tsorina amin'ny dingana dimy:
Ny fisian'ny uranium dia miseho amin'ny reactor nokleary, mamoaka angovo be dia be hanafanana ny rano mandra-pivoakany.
Ny etona dia aterina any amin'ny mpamorona turbinin'ny setroka izay apetraka amin'ny loop loop.
Rehefa tonga any, mihodina ny elatra turbinina ary afindrao ny mpamorona herinaratra eo ambanin'ny asan'ny etona, ka manova ny angovo mekanika ho angovo elektrika.
Rehefa mamakivaky ny turbine ny etona ao anaty rano dia alefa any amin'ny condenser izy io, izay mangatsiaka ary mivadika rano.
Aorian'izay, ny rano dia entina mba hahazoana etona indray, ka manidy ny faritry ny rano.
Ny sisa tavela amin'ny uranium dia ampirimina ao anaty ozinina, ao anaty dobo simenitra manokana misy fitaovana radioaktifa.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny hoe taratra nokleary sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Angovo nokleary » Taratra nokleary